Ivanhoe | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE! Ivanhoe | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE!
Raha ho an'ny sasany, hitily tsara tarehy bucks, voankazo Casino slots manana ny zavatra tonga lafatra ho anareo! Malaza ity famokarana Elk mitondra anao miverina any Retro andro niray zava-baovao amalgamation ny endri-javatra, -damaody slot milina, ary ny plush teboka teraka. Tsy mamela anao milalao spins mora foana ao 5 misaraka ambaratonga mba hahazo vola be karama ny sasany.
Momba ny Developer ny Ivanhoe
Elk Studios lasa mahagaga Tsirom Casino slots amin'ny toetry ny modely sy ny zavakanto algorithms hipoitra teny ambony rano mahagaga fihetsik'ireo sary mihetsika. Aingam-panahy avy amin'ny tantara nataon'i Sir Walter Scott, ny Studio efa tonga amin'ny lalao ity, izay misy Retro mikasika. Ny developer fantatra noho ny famoronana endri-tsoratra izay velona noho ny zava-baovao.
Manolotra anao io lalao tonga lafatra traikefa miaraka amin'ny kilasy ambony winnings. Ity iray amin'ireo ambony voankazo Casino slots manana endri-javatra tahaka ny:
Tsatòka-Ny lalao Powered by 3 reels miaraka 17 karama andalana. Azonao atao ny milalao azy manomboka avy 20p isan-kofehy ireny ho amin'ny £ 100 manerana ny fitaovana toy ny solosaina, finday avo lenta, ary PCs.
Tandindona - Ny voankazo Casino slots dia miorina amin'ny fiverenan'ny ny Mpanjaka ho Ivanhoe ady tamin'i Richard mba haka azy indray ny seza fiandrianana. Ny slots manana marika toy ny pasteky, cherries, satroboninahitra, voasarimakirana, manga 7s, mena 7s, trano fisotroana, malaza saina fotsy sy mena mba hahazo anao amin'ny alalan'ny lalao ny tombony tsara tarehy endri-javatra.
Bonus haavon'ny - Efa nahazo 5 ambaratongam-tombony samy hafa izay azo jerena ao amin'ny fampisehoana ny teboka teraka. Tsy mitovy ny fomba Retro iombonana pinball milina. Afaka mandresy ny endri-javatra tombony ianao raha afaka mahazo ny tombony eo amin'ny tsirairay mariky ny 3 reels. Rehefa avy nahazo ny vola madinika napetraka ny, dia afaka Gear hatramin'ny ambaratonga avo kokoa ny olana amin'ny fiakaran'ny multipliers. Miaraka fanampiny maimaim-poana spins, dia afaka hanenjika ny seza fiandrianana ho an'ny Richard mba handresy indray ny satro-boninahitra.
Free spins -Izany no voankazo Casino slots lalao manome anareo tsy ho andevo spins amin'ny satro-boninahitra, izay mitondra tena ho toy ny fivoaky ny suppléants sary masina hafa rehetra, afa-tsy ny aelezo. Raha ao amin'ny voalohany 2 ambaratonga, ianao no antenaina mba handresy, fara fahakeliny, 25 fotoana inona ny tsatòka dia. Ao amin'ny manaraka 2 ambaratonga, maintsy mandresy ianao 200 fotoana. Ao amin'ny ambaratonga farany, azonao atao bag 3000 fotoana.
Multipliers-Manampy anao amin'ny multipliers manomboka amin'ny 2x sy ny fanampiana ny amin'ny 1 isaky ny ambaratonga. Afaka ny hahatratra ny 6x indrindra ao amin'ny famaranana haavon'ny.
Izany no iray amin'ireo malaza voankazo Casino slots amin'ny RTP ny 96.3% ary tsy manam-paharoa amin'ny avo hampifandrafy manome anareo ny fahafahana handresy efa ho 500 indraindray ny tsatòka voalohany.